KhunMoung ' s: November 2007
100 Best Products 2007
PCWorld Editor's Choice
Top 100, in Ranked Order
Google Apps Premier Edition Review , Vendor Site
Intel Core2Duo Review , Check Prices
Nintendo Wii Review , Check Prices
RIM Blackberry 8800 Review , Check Prices
Parallels Desktop Review , Check Prices
Apple Mac OS X 10.4 "Tiger" Review , Check Prices
Adobe Premiere Elements3Review , Check Prices
Apple TV Review , Check Prices
Samsung SyncMaster 244T Review , Check Prices
HP dv9000t Review , Check Prices
Microsoft Xbox 360 Elite Review , Check Prices
Hitachi Deskstar 7K1000 Review , Check Prices
Samsung BlackJack Review , Check Prices
Apple iPod (80GB) Test Report , Check Prices
TomTom One Review , Check Prices
Dell UltraSharp 2407WFP Review , Check Prices
Red Octane Guitar Hero2Video , Check Prices
Nikon D80 Review , Check Prices
Aliph Jawbone Review , Check Prices
Shure E500PTH Review , Check Prices
CyberPower Gamer Infinity Ultimate Review , Check Prices
Asus w5fe-2P025E Review , Check Prices
Dell UltraSharp 2007WFP Review , Check Prices
Archos 704 Wi-Fi Review , Check Prices
Lenovo ThinkPad X60 Tablet Review , Check Prices
Canon EOS 30D Review , Check Prices
Canon Pixma iP4300 Review , Check Prices
Kaspersky Anti-Virus Review , Check Prices
Microsoft Office 2007 Review , Check Prices
Asus Crosshair Test Report , Check Prices
Dell XPS M1210 Review , Check Prices
Creative Zen V Plus (8GB) Review , Check Prices
Gigabyte GA-965P-DQ6 Test Report , Check Prices
Canon MP600 Review , Check Prices
LG Electronics BH100 Review , Check Prices
Fujitsu ScanSnap s500 Review , Check Prices
NEC MultiSync 90GX2 Review , Check Prices
Adobe CS3 Review , Check Prices
Dell XPS 410 Review , Check Prices
TiVo Series3 HD Digital Media Recorder Review , Check Prices
Apple MacBook Pro Review , Check Prices
Avira AntiVir Personal Edition Classic Review , Check Prices
Check Point Software ZoneAlarm Internet Security Suite Review , Download Store
SanDisk Sansa Connect Review , Check Prices
Oki Printing Solutions C3400n Review , Check Prices
Panasonic HDC-SD1 Review , Check Prices
Logitech Harmony 880 Review , Check Prices
Shure SE210 Review , Check Prices
Sign Up လုပ်စရာမလိုဘဲ ppt,pps,pdf,odp ဖိုင်တွေကို တင်ထားလို့ရတယ်။ Topics n Tags တွေကနေ ကြည့်ချင်တဲ့ Slide တွေကိုလည်း ကြည့်နိုင်တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ဆလိုက်တွေလည်း အများကြီးတွေ့ရတယ်။ တချို့ဆလိုက်တွေကို ဒေါင်းလုဒ်ချလို့ရတယ်။ ယူကျုမှာ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေကို ကြည့်သလိုပဲ ကြည့်လို့မကုန်တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဘလော့ဂ်တစ်ခု ညွှန်းမယ်ဗျာ။ သီချင်းဆိုဒ်တစ်ခုပါ။ Billboard Top Hits 100 ပုဒ်စီပါတယ်။ ခုနှစ်အလိုက်။ ၁၉၈၇ ကနေ ၂၀၀၃ အထိကို စုစည်းထားတာတွေ့တယ်။ သီချင်းအဟောင်းတွေ ရှာချင်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
အချို့သည် အွန်လိုင်းတွင်ချက်တက်ရင်း အချိန်အများစုကို အသုံးချကြသည်။
အချို့သည် အသိမိတ်ဆွေ ဘလော့ဂ်များတစ်ခုပြီးတစ်ခု လည်ပတ်သွားလာရင်း အချိန်များကို ဖြတ်ကျော်ကြသည်။
အချို့သည် အင်တာနက်တွင် လူမှုဝန်းကျင်မိတ်ဆွေတိုးပွားစေသော ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များတည်ထောင်၍ သူငယ်ချင်းတိုးပွားအောင် လုပ်ကြသည်။ အဖော်ရှာကြသည်။
အချို့သည် သတင်းနောက်လိုက်ရင်း အချိန်ကုန်ကြသည်။
အချို့သည် ကွန်ပျူတာတွင် ဂိမ်းဆော့ရင်း အွန်လိုင်းဂိမ်းများဆော့ရင်း အချိန်ကုန်ကြသည်။
အချို့သည် အသက်၁၈အထက် ၀က်ဆိုဒ်များကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖျော်ဖြေကြသည်။
အချို့သည် အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ကြည့်ပြီး အနားယူကြသည်။
အချို့သည် အင်တာနက်မှ တဆင့် ပညာရှာကြသည်။ အလုပ်ရှာကြသည်။
အချို့သည် အင်တာနက်မှ တဆင့် ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ၀င်ရောက်ပြောဆို ဆွေးနွေးကြသည်။
အချို့သည် ကွန်ပျူတာတွင် အင်တာနက် တပ်ဆင်ပြီး ဒေါင်းလုဒ်သာလုပ်ကြသည်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး မဖတ်ဖြစ်သေးသောစာများ၊ မကြည့်ဖြစ်သေးသောရုပ်ရှင်ကားများ၊ မသုံးဖြစ်သေးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကို စုပြုံချောင်သိပ်ထားသည်။
သောက်ကြီးသောက်ကျယ်တွေ လျှောက်ရေးနေတယ်။ သူကတော့ အဲဒါတွေမလုပ်တာ တစ်ခုမှ မရှိဘဲနဲ့။
Published by KhunMoung5comments
Kasperskies တွေအကြောင်းရေးချင်တာကြာပြီ။ မရေးဖြစ်ဘူး။ လူကလည်း Kaspersky, ထွင်လိုက်တဲ့ ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်တန်ပြန်အသုံးချပရိုဂရမ် အမည်ကလည်း Kaspersky။ ဒါမျိုးမရှိဘူးလေ။ Dr.McAfee, Mr.Norton, Mr.AVG, Mr.Avia, Dr.Avast လို့ ရှိမှမရှိတာ။ မကြားဖူးဘူး။ Kasperskies မောင်နှံတွေက တော်တော်လေးကို တော်ကြပါတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ယောက်ျား Eugene Kaspersky ကလည်း တော်သလို၊ ဇနီးဖြစ်တဲ့ Natalya Kaspersky ကလည်း ထိန်းသိမ်းမှုကောင်း စီးပွားရေးဥာဏ်ရှိတယ် ပြောရမှာပဲ။ အခုတော့ သူတို့ ကွာရှင်းလိုက်ပါပြီ။ Kaspersky Lab မှာတော့ တူတူအလုပ်လုပ်နေတုန်းပဲ။ တကယ်တော့ Kaspersky Lab ကို တည်ထောင်တာ Natalya ရဲ့ စိတ်ကူးတွေပါ။ အခုထိ ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့မှာဥက္ကဌရာထူးနဲ့ စီးပွားရေးပိုင်းလုပ်နေတာပဲ။ Eugene Kaspersky ကတော့ ဆော့ဝဲပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးဆောင်သူပေါ့။ လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ ရုရှားဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပါတယ်။
Kaspersky Lab အကြောင်းရော ဆော့ဝဲအကြောင်းရော လူပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းရော ရေးမယ်ဆို အများကြီးပဲ။ စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်ဖတ်လို့ရအောင် လင့်ခ်အညွှန်းတွေ ရေးထားပါတယ်။
Ubuntu သုံးနေပြီး အသံထွက်မှန်အောင်မထွက်တဲ့ ခွန်မောင်သိဖို့။ "oo-BOON-too" လို့ အသံထွက်တယ်။ အာဖရိကန်စကားလုံး။ အာဖရိကန် ကျင့်ဝတ်နီတိဆိုင်ရာ လူမှုဆက်ဆံရေး အယူဝါဒဆိုင်ရာ ဝေါဟာရဖြစ်တယ်။ သူတို့ ရိုးရာ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကနေ မြစ်ဖျားခံလာတာ။ တောင်အာဖရိက နိုင်ငံသစ်ရဲ့ အုတ်မြစ်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ နီတိသဘောတရားတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ လူဝင်စားယုံကြည်မှုနဲ့လည်း ဆက်စပ်ပါတယ်တဲ့။ အဓိပ္ပာယ်က “လူသတ္တ၀ါအချင်းချင်း ညှာတာကြင်နာမှု”လို့ပြောလို့ရတယ်။ Ubuntu Project တစ်ခုလုံးကို Sponsor လုပ်နေတာက တောင်အာဖရိက ဘီလျံနာသူဌေးကြီး Mark Shuttleworth ပါတဲ့။
"The Belief inauniversal bond of sharing that connects all humanity"
"I am who I am because of who we all are,"
YouTube ကို ဒီနိုင်ငံLocalအနေနဲ့ရပြီ။ Brazil, France, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, Poland, Spain, UK တွေအတွက် အခုနှစ် June မှာ စပြီးတင်တယ်။ ယူကျုကြည့်ရင်း нужен ли YouTube на русском? ဆိုလို့ကြည့်လိုက်မှ http://ru.youtube.com/ကို စပြီးသတိထားမိတယ်။ Local Content တွေကို ရှာလို့ရပြီ။ Local Language နဲ့ ရှာလို့ရတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုရှာတာတွေကို US YouTube Results တွေပြပေးတယ်။ Web2.0 Services တွေထဲမှာ ကြိုက်တာတစ်ခုကတော့ ယူကျုပါပဲ။
လောလောဆယ် မျှော်လင့်မိ ဖြစ်စေချင်မိတာကတော့
From "Crime Time"(2007) TV Series
"Crime Time" Series တွေကို အောက်ကလင့်ခ်မှာ ထပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Web2.0 Services တွေကို တီရှပ်ပေါ်မှာ ရိုက်နှိပ်ထားတာ။ ၂၃.၉၀ ယူရိုတဲ့။ အသုံးများတဲ့ Services တွေကို ထည့်ထားတယ်။ ကိုယ်သုံးတဲ့ Services တွေကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ တီရှပ်တံဆိပ်အမည်က "Are You Social?" တဲ့။ အင်တာနက်လောက အိုင်တီလောကမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Web2.0 ဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာ Social Web, Social Software အမည်နဲ့ အစားထိုးနေကြပါပြီ။ နောက်ထပ်မျိုးဆက်တစ်ခု ဖြစ်လာမယ့် Web3.0 ဆိုတာလည်း မဝေးတော့ပါဘူး။ အခုပြောတဲ့ တီရှပ်တံဆိပ် "Are You Social?" ဆိုတာကို ကျွန်တော်တော့ “သင် Web2.0,Social Web ဆိုတာကို မသုံးဘူးလား။ မသုံးဖူးသေးရင် ယနေ့ပင်သုံးပါ။ သုံးကြည့်ပါ။ မဟုတ်ရင် ခေတ်နောက်ကျသွားမယ်” လို့ ပြောနေသလို ထင်ပါတယ်။
Web2.0ဆိုတာဖြစ်လာလို့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ပိုင်နက်ဝပ်တွေတည်ဆောက်နိုင်ကြတာပါ။ တစ်လမ်းသွား သတင်းပေးနိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုတွေကနေ ရေးသူ ဖတ်သူ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်မှုတွေကိုရလာတယ်။ Web1.0 ကို "Read Only"Web လို့ပြောကြတယ်။ Web2.0 ကို "Read-Write"Web လို့ သဘောပေါက်လို့ရပါတယ်။ Web3.0မှာ ဒီထက်ပိုတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ မွမ်းမံနိုင်မှုတွေ ရလာမယ်ထင်ပါတယ်။
"The Best Web 2.0 Software of 2006" အတွက် GMail ကို Vote လုပ်ကြတာတွေရှိပါတယ်။ GMail ကို Web2.0 Software တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ သင့်မသင့် ငြင်းတာတွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါလေးတွေဖတ်ကြည့်ပါ။
using GMail asaWindows partition
using GMail asanotepad
extending GMail to support Getting Things Done withaFirefox extension
Web2.0 Services တွေမှာ နေ့စဉ်သုံးဖြစ်တာတွေကတော့ ဒါတွေပါပဲ။
အိမ်မည်းမည်းကြီးကို ပြန်ပြီး ပြုပြင်လိုက်ပါတယ်။ ဆေးတွေထပ်သုတ်လိုက်တယ်။ မီးတွေဘာတွေ ပေးလိုက်တယ်။ အရင်လို မှောင်မှောင်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူး။ :D
ဘလော့ဂ်ဂါများ ဖွင့်ပြနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်လည်း ဖွင့်ပြရတော့မယ်။ အိတ်ထဲမှာ ဘာရှိသလဲ ဆိုလာတဲ့ ဒီမိုကစ်တိုကတော့ ရေးပြီးသွားပြီ။ ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်ဖွင့်ရဦးမှာပါပဲ။ တကယ်တော့ ကျောပိုးအိတ်တကားကား ခါးပတ်အိတ်တလွယ်လွယ်နဲ့ မနေဖူးပါ။ သဘောကျဖူးတဲ့ အိတ်တွေကို ၀ယ်ဖူးပါတယ်။ စုထားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြင်သွားလာရင်တော့ အဲဒါတွေကို ရှုပ်တယ်ထင်နေရော။ အိတ်ထဲမှာ ဘာရှိလဲရေးဖို့က နိစ္စဓူဝသွားလာနေတဲ့အခါ သယ်ယူသွားလေ့ရှိတဲ့ အိတ်ကိုပြောတာမဟုတ်လား။ ဒါဆိုရင်တော့ မယူဖူးပါဘူး။ အဲ...မရှိမဖြစ်မယူမဖြစ် အသုံးဝင်မယ့်ဟာတွေကိုတော့ ယူသွားရတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အိတ်နဲ့တော့ ဟုတ်ဘူးဗျ။ ဘောင်းဘောင်းထဲ ပြီးတော့ အပေါ်ဝတ် အင်္ကျီအိတ်ထဲ ထည့်သွားလိုက်တာပဲ။ အပျင်းကြီးတယ်တော့ ဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုပဲ နေတတ်လို့ပါ။ ဖရီးစတိုင်လ်ပေါ့နော။ :)
နှိုက်လိုက်ရင်ထွက်လာမယ့် ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ပတ်စ်ပို့ပါတယ်။ ကျောင်းသားကဒ်ပါတယ်။ မြေအောက်ရထားကဒ်ပါတယ်။ ကားကဒ်ပါတယ်။ ကဒ်ထည့်တဲ့ Card holder လေးထဲမှာ ကဒ်အစုံထည့်ထားတယ်။ ဆေးအာမခံကဒ်ပြားပါတယ်။ ဘောင်းဘောင်းထဲ နောက်ထပ်ထည့်လေ့ရှိတာက ... အမ်ပီသရီးပလေယာရယ်(အိုင်ပေါ့တွေ ယူပေါ့တွေ မသုံးနိုင်သေးပါ) ပီကေတွေရယ်(ပါးစပ်အငြိမ်မနေတတ်ပါ) အားနေရင် စားမြုံ့ပြန်နေဖို့အတွက်။ အဲ အားလုံးထဲမှာ အရေးကြီးတယ် မပါမဖြစ်ဆိုပြီး ဘောင်းဘီအိတ်ထဲမှာ နေရာပေးနေရတာက ပိုက်ပိုက်အိတ်ပြားကပ်ကပ်လေးပါပဲ။ အဲဒီထဲမျာ စက္ကူရွက်တချို့ ... နည်းသည်ဖြစ်စေ များသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်...ပြီးတော့ အကြွေစေ့တချို့ရှိတယ်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ နှစ်ပုံလည်း ပါမှာပေါ့နော...။ :D
Smoke and You Die Ashtrays
it's straight-up too pretty to be defaced with raunchy ashes and ciggie butts. The Taiwanese tabletop design group's take on the smoke disposal vessel isaclever and direct correlation of what we do to our real lungs when we inhale those nasty cancer sticks. Andaclean Lung Ashtray signifies the path to respiratory health, unless, of course, you've decided to just use one.
Kissingasmoker is like lickingadirty ashtray.
Guns kill…if you pull the trigger
Arsneic kills…if you swallow it
Tobacco kills…if you smoke it
Make your choices and bear the consequences.
Smoking = Slow Suicide
SmokeFree = A Bright Future
Smoking? You're joking...
Pictures from findingcheska , core77
Slogans from badvertising
ကျေးဇူးတရားကို ကျေးမစွပ်ခြင်းသည် မင်္ဂလာတရားဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်ခြင်းသည် မင်္ဂလာတရားဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတရားကို မမေ့လျော့ခြင်းသည် မင်္ဂလာတရားဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတရားကို အမှတ်အသားရှိခြင်းသည် မင်္ဂလာတရားဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတရားကို ဖော်ညွှန်းခြင်းသည် မင်္ဂလာတရားဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတရားကို တုံ့ပြန်ခြင်းသည် မင်္ဂလာတရားဖြစ်သည်။
ပရင့်တာ တစ်ခုကနေ ထုတ်လိုက်တဲ့ ပရင့်စာရွက်တစ်ရွက်ကနေပြီးတော့ ပရင့်ထုတ်တဲ့ ရက်စွဲ၊အချိန် ပရင့်တာအမျိုးအစား ပရင့်တာစက်နံပါတ်စဉ် Serial Number ကို သိအောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပရင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ စာရွက်တစ်ရွက်တိုင်းမှာ ပရင့်တာ ထုတ်လုပ်သူ ကုမ္ပဏီက ထည့်သွင်းမြှုပ်နှံထားတဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကုဒ်တွေကို ပြန်ပြီး Track Back လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ Encode လုပ်ထားတာကို Decode ပြန်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ၀ယ်ယူထားတဲ့ ပရင့်တာဟာ ထုတ်လုပ်သူ ရောင်းချသူဆီမှာ မိမိအမည်၊လိပ်စာနဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိရင်တောင်မှ ၀ယ်ယူတဲ့ဒေသက တဆင့် Track လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့။ အဓိကကတော့ Forensic Case တွေမှာ Information ရယူဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး EFF ဆိုတဲ့ Electronic Frontier Foundation က သုတေသနလုပ်ပြီး သက်သေပြထားပါတယ်။ EFF ရဲ့ Machine Identification Code Technology Project က ဒီလိုဆိုပါတယ်။
ပုံတွေနဲ့ အတူသေချာရှင်းပြထားတာကို ဒီကနေသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Source : http://w2.eff.org/Privacy/printers/docucolor/